Thwebula AVG 5.2.0.1 isizulu – Android – Vessoft
Faka via Google Play
Operation uhlelo: Android, Windows
License: Ezamahala, shareware
AVG – an isofthiwe unqulo wesi arab kuphela ukuvikela kudivayisi yakho ngokumelene izinhlelo ezilimazayo futhi amagciwane. AVG aqalaze amafayela, izicelo kanye izilungiselelo ahlukahlukene kudivayisi for ikhodi enonya futhi unikeza ukususa idatha onegciwane ekupheleni wokuhlola. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukude ukuphatha idivayisi futhi ukucacisa indawo ye idivayisi elahlekile in icala lokweba. AVG inikeza ukuphequlula ephephile of the web-sites on the internet. Isofthiwe kwenza ukuqapha ibhethri noma inkumbulo imithombo zedivayisi futhi asuse izinqubo ezihlukahlukene ukubambezela uhlelo. AVG futhi isekela isethaphu isithwebuli ukuhlola kudivayisi nge isikhathi esungulwe namkha isicelo umsebenzisi.
Uhlelo Onamandla ukuvikelwa
Updates njalo yolwazi igciwane
The isheke eningiliziwe izilungiselelo kanye nokuqukethwe idivayisi
The ukuthola idivayisi elahlekile
Performance kanye indiscriminateness of the izinsiza uhlelo
Amazwana on AVG:
AVG Ahlobene software:
Antiviruses The unqulo wesi arab okuphelele ukuvikela uhlelo ngokumelene amagciwane kanye malware. Futhi kusekela ukuhlinzwa izindlela ezehlukene ukuhlonza izinkinga ohlelweni bese anikeze isivikelo izinsongo inethiwekhi.
360 Security 3.9.2.5006
Antiviruses System nokwenza Isofthiwe ukuvikela idivayisi ngokumelene amagciwane kanye amamojula ezinonya, ukuhlanza uhlelo, ukuphatha izicelo bese ugcine energy ibhethri.
English, Українська, Français, Español... Avira AntiVir 4.5
Antiviruses The free war ukuvikela simiso idivayisi ukulwa namagciwane kanye nezinye izingozi. Futhi uma kunesidingo kusekela akude idivayisi ilokhi futhi izingcingo ezingenayo noma SMS.
English, Español, Deutsch, 中文... Dr.Web 10.1.2
Antiviruses Isofthiwe odumile unqulo wesi arab ukuqinisekisa ukuvikeleka umshini izinsongo ehlukahlukene. Isofthiwe ivikela uhlelo ngokumelene esiyingozi okuqukethwe inethiwekhi nezinye amagciwane of izinhlobo ezahlukene.
English, Українська, Français, Español... CM Security 3.1.3.1048
Antiviruses The unqulo wesi arab okuphelele ukuvikela kudivayisi ngokumelene amagciwane of izinhlobo ezahlukene. Isofthiwe isebenzisa ubuchule zanamuhla ukuthola nokususa izinsongo.
English, Українська, Français, Español... 2048 1.3
Imidlalo Umdlalo puzzle sokuthuthukiswa logic kanye umcabango umdlali. Umdlalo has a Gameplay umbukwane ngesikhathi lapho umdlali kancane kancane ekutholeni okusezingeni amaphuzu irekhodi.
Dolphin Browser 11.5.15
-Internet Isiphequluli Fast for elula web ukuphequlula. Isofthiwe iqoqo izici ewusizo ukuhlala ntofontofo online.
English, Français, Español, Deutsch... Mozilla Firefox 49.0.2
-Internet Omunye abaholi emhlabeni iziphequluli umhlabeleli ngokusekelwa ubuchwepheshe besimanje. Isofthiwe inikeza ukuhlala ukhululekile kwi internet kanye isekela uxhumano anezele ezahlukene.
English, Українська, Français, Español... TuneIn Radio 14.7.13402
Abanye Isofthiwe popular ukulalela eziteshini eziyizintandokazi zakho zomsakazo emhlabeni wonke kanye nekhono ukuzivumelanisa izintandokazi musical umsebenzisi.
WiFi Manager 3.5.4.2
Internet An lula ukusebenzisa isofthiwe ukuphatha amanethiwekhi WiFi. Isofthiwe ubonisa ulwazi mayelana nesimo se-amanethiwekhi atholakalayo.
English, Français, Español, Deutsch... Teamviewer 12.0.6033
Ukungena kokukude Isofthiwe for elawulwa kude computer ngokusebenzisa ekhethekile multi-touch liphathe uthumele amafayela zombili izinkomba.
English, Українська, Français, Español... All-In-One Toolbox 5.3.5
System nokwenza Amathuluzi anamandla nokwandisa futhi ukwandisa ukusebenza ohlelweni. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukususa amafayela esikhashana, ukuhlanza isilondolozi bese ususa izicelo.
English, Українська, Français, Español... ooVoo 3.0.2
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Ithuluzi ukuxhumana nabantu emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze izwi noma video izingcingo high ukushintshanisa imiyalezo.
English, Français, Español, Deutsch... BS.Player 1.27.190
Abadlali Media Umdlali ephelele ukudlala amafayela alalelwayo nama-video. Isofthiwe iqukethe isethi elikhulu codecs ukubuka ividiyo in takhiwo kakhulu futhi muhle kakhulu ukudlala umculo.
English, Українська, Français, Deutsch... Adobe AIR 21.0.0.176
Izandiso Isofthiwe for the kuhlonyiswa kwetinhlangano idivayisi. Isofthiwe kwenza ukudala noma ukugijima izicelo athuthukile ngezilimi izinhlelo ezahlukene.